musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » Black Friday bongozozo muLondon sezvo vatyairi veTube vanorova
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Rail Kufamba • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
Kufamba kwacho kwakakanganisa masevhisi muLondon neChishanu Chishanu, rimwe remazuva ekutenga akabatikana pagore, nekutengesa kuri kuitika muzvitoro zvakawanda.
Unionized London Underground vatyairi vezvitima vakaita kuramwa kukuru paBlack Friday, vachiti kufamba uku kwakakonzerwa ne "kubvarurwa kwezvibvumirano zviripo uye hurongwa hwekushanda pamberi pekuvhurwazve kweNight Tube."
Traffic pamashanu makuru London Tube lines - Central, Jubilee, Northern, Piccadilly neVictoria - yakakanganiswa nekuramwa kwakarongeka nhasi, ukuwo mhirizhonga muhurongwa hwekufambisa hweguta reBritish iri kutarisirwa kupera kwesvondo.
Sekureva kweRail Maritime and Transport Union (RMT), iyo yakatungamira kuramwa mabasa, nhengo dzayo zhinji dzaisagutsikana nemaitiro matsva ekuchinja.
Kutakura kweLondon (TfL), sangano reveruzhinji rinoona nezvezvifambiso zveveruzhinji muguta, rakaratidza kuodzwa mwoyo pamusoro pechisarudzo cheRMT. Mune chirevo, TfL akati marosta matsva akaunzwa kune vatyairi veTube muna Nyamavhuvhu uye aisanganisira akati wandei kuvimbiswa kuvashandi nezvekuchengetedza basa.
Kufamba kwacho kwakakanganisa masevhisi mhiri London paBlack Friday, rimwe remazuva akabatikana zvikuru ekutenga egore, nekutengesa kuri kuitika muzvitoro zvakawanda. Vamwe vevari kuramwa mabasa vaonekwa vachinhonga pazviteshi nemabhena nemireza.
Londonmeya akataurawo achipokana nekufamba. "Ichi chiitiko chisina kufanira chekuramwa mabasa neRMT chiri kukonzera kukanganisa kwakawanda kumamirioni eLondon uye zvicharova London vatengesi, tsika uye kugamuchira vaeni panguva yakaipisisa," Sadiq Khan akadaro paTwitter.
Kuramwa mabasa uku kuri kuenderera mberi neMugovera, paine hurongwa hwekuramwa mabasa akawanda panguva yeKisimusi.
“Vatengi vanoda kufamba vachishandisa TfL masevhisi anorayirwa kuti atarise vasati vafamba, vabvumire nguva yakawanda yerwendo rwavo, uye kufamba panguva dzakanyarara pazvinogoneka, "TfL akadaro, achiwedzera kuti vanhu vekuCentral. London vanorairwa "kufamba, kutenderera kana kushandisa e-scooter yekurenda" pane kushandisa Tube.